Mmeghachi azụ nke Herxheimer - 4 ọgwụgwọ anụ ahụ & ọgwụgwọ ụlọ | Ọkọwa Okwu Ahụike
Mmeghachi azụ nke Herxheimer - 4 Natural Cures & Home Remedies
Clifford August 29, 2019
2 Mmeghachi azụ nke Herxheimer.
3 Ihe mgbaàmà ndị na-etolite ma ọ bụ na-aka njọ n'ihi nzaghachi Herxheimer gụnyere:
4 Mbelata mmetụta nke ihe mmeghachi nke Herxheimer.
5 Na-a Pụ Mmiri Ọ Liụ .ụ.
6 Kpachapụ Nkpughepu nke Ntinye.
7 Ihi Era.
8 Jiri Probiotic mee ihe.
9 Emecha Ike.
10 Njikọ posts:
Mmeghachi azụ nke Herxheimer.
Ọ bụ ihe niile maka ndị nwere ọnọdụ na-adịghị ala ala dịka fibromyalgia, Ọrịa Lyme, na ụdị ọrịa ndị ọzọ na-ebute ọrịa na-akawanye njọ ozugbo ịmalite ọgwụgwọ. Mgbanwe mberede a na-emetụta ọtụtụ ndị ọrịa. Agbanyeghị, mmụba a na mgbaàmà ike nwere ike ịbụ ihe ngosipụta na ọgwụgwọ a na-arụ ọrụ nke ọma.
A na-ahụ mmeghachi omume anụ ahụ a dị ka mmeghachi omume Herxheimer. Familiarmata ihe omume a na ụzọ iji belata ike ya nwere ike ịba uru maka ndị a na-agwọ maka ọrịa na-adịghị ala ala, ọrịa eriri afọ, ma ọ bụ egbu egbu.
Nzaghachi nke Herxheimer bụ usoro anụ ahụ sitere n'okike nke ndị endotoxins na-ebute. A na-ewepụta ihe ndị a na - emerụ ahụ mgbe a na - emebi microorganisms na nje na - emerụ ma ọ bụ nwụọ. Ebe ọ bụ na-emebi nje ndị na-emebi ihe, ha na-ahapụ mmiri ọgwụ nwere endotoxins mbụ. Nke a na - eme ka a na - ebugharị nsí ndị ahụ na sistemụ kwesịrị ekwesị ma chụpụ ya n'ahụ. Ka osila dị, mbibi ngwa ngwa nke nje nwere ike ime ka otutu endotoxins na-ebute oke nsí. Mgbe nke a mere, usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-aza site na ịkpalite mmeghachi omume nke enweghị nsogbu nke na-ebute mbufụt nke ahụ nwere ike ịnwe ahụ niile. Nke a nwere ike ibute ihe mgbaàmà nke ugbu a na mmepe nke mgbaàmà ugbu a.
A na-ahụkarị mmeghachi omume Herxheimer n'oge ọgwụgwọ ọgwụ nje n'ihi na ọgwụ nje na-ebibi ọtụtụ microorganisms na nje. Ọ bụ ezie na mmeghachi omume nke Herxheimer abụghị ihe na-egbu egbu, ọ na-akpatakarị oge mgbu, ahụ erughị ala, na ihe na-akawanye njọ. Ptkpa oke na-egosipụtakarị ogo nke ihe mmerụ ahụ nke sistem na - ebute.
Ihe mgbaàmà ndị na-etolite ma ọ bụ na-aka njọ n'ihi nzaghachi Herxheimer gụnyere:
Lethargy & ike ọgwụgwụ
Ọsụsọ na-acha anwụrụ ọkụ
Dị ka ọ na-adị, mgbaàmà na-ebilite n'ime awa ole na ole ruo ọtụtụ ụbọchị mgbe ọgwụgwọ ya gasịrị. Agbanyeghị, dabere na ọnọdụ nke bacteria, mgbaàmà nwere ike ịmalite ma emesịa.
N'ihi ọnọdụ mgbaàmà na-akawanye njọ, ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka ndị ọrịa iche na ogo ọnọdụ ha arịgoro n'ihi ọgwụgwọ ahụ. Agbanyeghị, ọ bụ ezie na ọgwụgwọ na-akpata mmụba nwa oge na mgbaàmà siri ike n'ihi ntọhapụ ukwuu nke nsị na ọnọdụ ahụ ga-aka mma n'ikpeazụ. Ahụ mmadụ na-aza n'ụzọ dị otu a na-apụtakarị na ọgwụgwọ a na-arụ ọrụ nke ọma.
Mmeghachi omume Herxheimer nwere ike ịnọ otu izu ma ọ bụ karịa karịa ọtụtụ ọnwa. Oge oge mmeghachi omume dabere na ihe ndị ọrịa n'otu n'otu. Ikekwe onye kachasị ekpebi ihe ga-emeghachi omume bụ ihe a na-eme yana ọnọdụ ya. Dịka ọmụmaatụ, ọrịa Lyme nwere ike ibute mmeghachi omume Herxheimer ogologo. Ihe ndi ozo gunyere aru ike ibu na nsí na ihe ndi ozo, ya na aru ike nke ndi oria. Ya mere, onye ọrịa ọ bụla na-ahụta mmeghachi omume Herxheimer na ọkwa ogo ya na oge ọ bụla.
Ọ bụrụhaala na mmeghachi omume Herxheimer na-adị oke njọ, ọgwụgwọ kwesịrị ịga n'ihu. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka ndị ọrịa ịma jijiji ma ọ bụ nwee nchegbu maka mmepe nke mgbaàmà ọhụụ na ịkwụsị ọgwụgwọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na mmeghachi omume ahụ bụ mmeghachi omume nke Herxheimer, ọ kacha mma ịga n’ihu ọgwụgwọ ebe ọ bụrụ na enwere mgbapụta.
Mbelata mmetụta nke ihe mmeghachi nke Herxheimer.
Ọ bụ ezie na mmeghachi omume nke Herxheimer na-egosi na ọgwụgwọ na-arụ ọrụ nke ọma, ọ naghị eme ka ọnọdụ onye ọrịa ahụ nwee ahụ iru ala ozugbo. Ka ọ dị ugbu a, enwere ọtụtụ ụzọ igbochi mmetụta symptomatic nke mmeghachi omume Herxheimer na-enweghị igbochi nrụpụta ọgwụgwọ. Enwere ike iji ya mee ihe ndị a dị mkpa mgbe ekwesịrị, na-eji ọgwụ nje, ma ọ bụ na-agwọ ya maka ọrịa na ụdị ọrịa ndị ọzọ na-adịghị ala ala iji belata ike Herxheimer.
Na-a Pụ Mmiri Ọ Liụ .ụ.
Mmiri a gbapụrụ agbaze, mmiri ọgwụ, na ọtụtụ mmiri ọgwụ ndị ọzọ na-anaghị egbu ume, na-enyere aka wepu nsí na nhicha ọnya afọ. Nọgide na-enwe oke ikuku nke hydration na-akwado ọrụ imeju na akụrụ na-eme ka ọ dịkwuo mma ka a na-ewepụ mmiri. Idobe usoro ndị a ka arụ ọrụ ha nke ọma nwere ike inyere ahụ ahụ aka iwepu nsí ndị a tọhapụrụ n'ọbara ahụ wee belata ihe mgbaàmà Herxheimer.
ShopFreeMart Hydration Drops ga enyere aka ịbawanye mmụba mmiri n’ime sel.
Kpachapụ Nkpughepu nke Ntinye.
Gburugburu ebe obibi anyị nwere ọtụtụ nsị ndị nwere ike ịkwalite nsí na nsonaazụ na-enye aka n'ịba ụba nke mgbaàmà Herxheimer. Izere mmanya na-aba n'anya, anwụrụ ọkụ, BPA, ọgwụ na-egbu egbu, na ngwaahịa ndị emepụtara nwere ike belata nje ahụ na sistem ma na - akwado ịhapụ ya.
Ahụ́ na-eduzi ọtụtụ usoro mweghachi mgbe ọ na-ezu ike nke ọ na-enweghị ike ịrụzu mgbe ọ na-eteta. Mgbe ị na-enwe mmeghachi omume nke Herxheimer n'ihi oke ịxicụbiga mmanya ókè, ọ kachasị mma ịhapụ oge ka ukwuu maka ụra ụra dị mma. Ọ bụrụ n’ikwere na ị na-arịa oke nsị, dozie elekere ọzọ ma ọ bụ abụọ nke ụra kwa abalị. O yikarịrị ka ahụ ga-erite uru dị ukwuu site n'inweta ụra ruo awa itoolu ruo iri mgbe ị na-ehi ụra.
Jiri Probiotic mee ihe.
Probiotics bụ nchịkọta nke ezigbo nje na-akwado ọrụ eriri afọ gụnyere eriri afọ. Site na iji probiotic dị elu na-akwado okpụ ahụ, ọ nwere ike ịnọgide na-adị ọcha ma na-arụ ọrụ nke ọma iji melite usoro detox ma belata mmeghachi omume nke Herxheimer. Ọgwụ nje nwekwara ike inye aka kwụsị mbibi nke nje na-egbu ọzịza nke ọgwụ nje na-akpata. Nke a nwere ike inye aka weghachite ahụike gootu ma belata ihe mgbaàmà Herxheimer.
Mmeghachi omume nke Herxheimer bụ mmeghachi omume okike maka mbibi nke nje na-emerụ ahụ na ụmụ nje ndị ọzọ na-eyi egwu. Ọ bụrụ na mmeghachi ahụ dị oke njo ma ọ bụ sie ike, ị nwere ike kwụsịtụ ịkwụsị ma ọ bụ ibelata ọgwụgwọ. Mmeghachi omume dị elu nwere ike ibute mechie ụfọdụ usoro ahụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ ga - ekwe omume, ọ kachasị mma ịlụ ọgụ site na mgbaàmà ma gaa n'ihu ọgwụgwọ n'ihi na mmeghachi omume Herxheimer na - egosipụtakarị na ọgwụgwọ na - arụ ọrụ dị ka eburu n'uche. Iji usoro ndị a tụlere n’elu nwere ike inye aka belata mmetụta nke mmeghachi omume Herxheimer iji kwado usoro ọgwụgwọ ka mma, belata mgbaàmà, ma kwalite ọdịmma ka mma.
Candida - Ezi ọgwụgwọ na ọgwụgwọ
Ihe na Mmeghachi azụ nke Herxheimerakpado mmetụta herxheimer, mmeghachi omume herxheimer, herxheimer mmega candida, herxheimer mmeghachi cbd, herxheimer mmeghachi omume lyme, ihe mgbawa herxheimer, jarisch-herxheimer
Ọgwụ Okike Maka Ọrịa ịba ọcha n'anya B
Asịrị na-agwọ ọrịa HIV